Ihhotela lesiqhingi - I-Penthouse - I-Airbnb
Ihhotela lesiqhingi - I-Penthouse
Igumbi e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Lamuholidaysolutions
Ihhotela lase-Island ngezinye izikhathi libizwa ngokuthi “I-Twin Towers”, futhi phezulu kombhoshongo ngamunye kunendlu yokulala enophahla lwayo. Amakamelo athola umoya omuhle, futhi akukho lutho olungcono kunokuphumula ku-hammock ephahleni, ukufunda noma ukulalela nje impilo yansuku zonke yasesigodini ngezansi.
Izitezi ezimbili: igumbi + uphahla
1 umbhede omkhulu okabili
1 umbhede owodwa
2/3 imibhede yophahla olulodwa
Yonke imibhede inenethi yomiyane
Indlu yokugezela yangasese enethoyilethi neshawa
Amathawula namashidi okulala ayatholakala
Ihhotela lase-Island litholakala cishe imizuzu emi-4 ukuya ogwini nje kwebhilidi elilodwa kude ne-Fatuma's Tower elidume ngezindawo zokuhleba ze-Yoga. Kukhona i-WiFi kodwa ayikho i-swimming pool. Sihlinzeka ngokudluliswa kwezindiza ngezindleko ezengeziwe kulabo abafuna ukuhlangatshezwana nabo esikhumulweni sezindiza. Uma ungathola indlela eya eShela vele ucele i-Island Hotel, wonke umuntu oseshela uyayazi indawo.
Sihlela uhambo lwama-dow nohambo
4.74 (izibuyekezo ezingu-35)
Umakhelwane yiPeponi Hotel okuyihhotela elihamba phambili eLamu Island. IPeponi inenhlanhla yokuba nendawo yotshwala futhi iyindawo yokuhlangana yezivakashi eziningi ezivakashela eShela